Mareykanka oo beeniyey burcadnimo maaskaro oo lagu eedeeyey |
Mareykanka oo beeniyey burcadnimo maaskaro oo lagu eedeeyey
Dowladda Mareykanka waxba kama ogeyn shixnad maaskarooyin ah oo loo waday dalka Jarmalka, taasi oo saraakiisha Berlin ay Mareykanka ku eedeeyeen inay ka leexsadeen garoonka diyaaradaha Bangkok, waxaa sidaas sheegtay afhayeen u hadashay safaaradda Mareykanka ee Thailand.
Hadalkeeda ayaa yimid kadib markii xoghayaha Arrimaha Gudaha ee Berlin Andreas Geisel uu Jimcihii sheegay in 200,000 oo maaskaro ah oo loo soo waday dalka Jarmalka “laga leexsaday” Bangkok, loona weeciyey Mareykanka, taasi oo uu ku qeexay “ficil burcadnimo oo casri ah”.
“Dowladda Mareykanka ma qaadin wax tallaabo ah oo ay ku leexsanayso qalabka 3M ee loo waday Jarmalka, mana ka war hayno shixnad noocaas ah,” ayey u sheegtay Reuters, Jillian Bonnardeaux oo ah afhayeenka safaaradda Mareykanka ee Bangkok
Eedeynta maaskarooyinka la leexsaday ayaa timid xilli dalalka caalamka ay loolan ugu jiraan inay helaan agabka looga hortagga faafitaanka cudurka Coronavirus.
Xulufada Mareykanka ee Yurub iyo Koonfur America qaarkood ayaa horey uga ashtakooday wax ay ugu yeereen xeelad ay Washington adeegsaneyso oo ku leexsaneyso agabyada caafimaad ee ay dalbadaan ayada lacag ka badan middooda u yabooheysa shirkadaha soo saara qalabka caafimaadka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Axaddii sheegay inaysan jirin “wax ficil burcadnimo ah,” oo ay Washington ku kacday.